Umzobo owenziwe ngeziqwenga zekhodiyani nguJolita Vaitkut | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ndenze umzobo kwi-accordionist UMartynas Levickis ngeekhodiyoni zokwenene kunye namalungu azo. Ikhodiyani ine amashumi amabini amawaka amaqhekeza ngaphakathi, Ke wagqiba kwelokuba enze umfanekiso kunye nala malungu. Ngenxa yoku sithatha iikodiyoni ezimbini ezindala kwaye yayiyindlela entle yokuphefumla ubomi obutsha kwizixhobo ezindala njengeprojekthi yobugcisa. Kuthathe malunga neeyure ezine ukuyenza.
Xa ndathumela umsebenzi wam kuFacebook, ndabuza abahlobo bam ukuba ndifuna ukufumana iziqwenga zepiyano kwiiprojekthi zam ezintsha, kwaye abanye babahlobo bam bandinika. UJolita Vaitkut Yiyo umyili kunye nomculi, evelisa kwaye isebenzise izimvo ezingaqhelekanga. Uyaziwa kakhulu ngokudala ubugcisa esebenzisa ukutya okanye ezinye izinto, ezinobungakanani obahlukeneyo beepensile, amaphepha kunye nezinye.
Ngaba ukhe wakuthathela ingqalelo ukuba ngumculi owaziwayo kwimithombo yeendaba kwaye ube nefuthe elikhulu?.
Ndingumfazi oneminyaka engama-20 ubudala, umculi waseLithuania. Ndenze imisebenzi ndisebenzisa itshokholethi, izinongo ezahlukeneyo, isosi yetumato, itshizi, ezinye iimveliso kunye nezinto zokwakha.
Ndenze umzobo kunye ne-accordionist uMartynas Levickis ngee-accordion zangempela kunye neenxalenye zayo. Ikhodiyani inamaqhekeza amalunga namashumi amabini amawaka ngaphakathi, ke wagqiba kwelokuba enze umfanekiso kunye neziqwenga. Sithatha inxaxheba kwiikhodiyoni ezimbini ezindala ngenyameko. Andizange ndikholelwe ukuba imisebenzi yam iza kuba nefuthe elingaka. Njengoko kucacisiwe nguJolita Vaitkut.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobo owenziwe ngeziqwenga zekhodiyani nguJolita Vaitkut
I-logo entsha ye-Instagram kunye noyilo